Sihlalutya i-278-intshi uPhilips E8E00QJAB / 27 esweni | Iindaba zeGajethi
Sihlalutya iliso le-Philips E278E8QJAB / 00, i-intshi ezingama-27 zomsebenzi omsulwa
Sibuya nohlalutyo olutsha kwiActualidad Gadget yezo zikunceda uthathe isigqibo phakathi komxholo omninzi. Siyazi ukuba ukuthenga iliso kwimeko ezininzi kuyingozi xa kuthathelwa ingqalelo inani elikhulu lezixhobo ezinikezelwa kwintengiso eneempawu ezifanayo kunye namaxabiso. Kwakhona sisebenzisana Philips ukuvavanya enye yezixhobo zakho.
Ngeli thuba Sinezandla zethu i-27-intshi egobile esweni i-E278E8QJAB / 00 esuka kwiPhilips, esweni esisebenza ngeendlela ezininzi esenza kakuhle. Hlala nathi ukuze ufunde okungakumbi ngesi sixhobo esinokuba lihlakani elikhulu lomsebenzi wakho kunye nexesha lakho lokuzonwabisa.
Kucacile ukuba asizukufumana isixhobo esinexabiso eliphantsi, kodwa inyani kukuba ukuthathela ingqalelo izibonelelo zayo kukude ekubeni sisixhobo esibizayo. Ewe, yifumane kwiivenkile ezinkulu ezinje ngeWorten okanye i-El Corte Inglés, kodwa thina I-Philips 278E8QJAB / 00 E-line 27-intshi egobile i-LCD Monitor ene-Ultra Wide-Colour Full HD Monitor (1920 x 1080) -Mnyama Ngaphambi kokuba siqhubeke nohlalutyo olunzulu apho zonke iingenelo zalo kwaye ngakumbi i-cons yalo iza kuphuma, siya khona ngaphandle kokulibazisa.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Uphawu lwendlu encinci
2 Iimpawu zobugcisa: Idatha elungileyo, nangona siphoswa yinto
3 Unxibelelwano, imultimedia kunye namava omsebenzisi
3.1 Amanqaku ngokuchasene
3.3 Amanqaku afanelekileyo
Uyilo kunye nezixhobo: Uphawu lwendlu encinci
Sizifumana njengoko besitshilo isihloko kunye noyilo Uphawu lwendluIsamsung iphantse ihlale ivula iiplastikhi ezibengezelayo, ethi nangona zintle xa uzijonga kuqala, zihlala zihamba kakubi ngothuli kunye nokucoca, kuba zihlala zinikezela nge-abrasions ezincinci njengoko sele kusenzeka kwiimveliso ezifanayo ezivela kwezinye iinkampani zesitayile ye-PlayStation 4, kodwa ngokunyanisekileyo ... ungayiphika njani ukuba intle kakhulu xa uyijonga kuqala? Inophambili ngezakhelo ezingabonakali zincitshisiwe, kwaye iliso le-intshi ezingama-27 aliyidingi, sikwacinga ukuba iliso elibukhali kufuneka lizame ukugcina ubume bepaneli, okanye ubuncinci lingalonakalisi imveliso enokulawuleka njengemonitha.
Ngokuma: 620 x 470 x 189 mm
Ngaphandle kokuma: 620 x 365 x 68 mm
Ipakishwe: 730 x 539 x ​​186mm
Ngokuma: 4,80 Kg
Ngaphandle kokuma: 4,57 Kg
Ngokupakisha: 7,02 Kg
Ifemu ikhethe izinto ezi-ethe-ethe ezingahambelaniyo nazo. Kukwenzeka okufanayo kwisiseko, esenziwe ngentsimbi emnyama engwevu ukuze ingangqubani, iyakonwabela ukumila kwecrescent elingisa igophe lesikrini elinikezela ngokusebenza kakuhle xa kufikwa ekubambeni isixhobo nkqo. Sithathela ingqalelo ukuba asinakubutshintsha ubude, kodwa sinako ukuthambekela kweliso okuza kuba phakathi kwe -5º kunye ne-20º, ayininzi kodwa yanele ukuyilungelelanisa neemfuno zethu.
Iimpawu zobugcisa: Idatha elungileyo, nangona siphoswa yinto
Siqala ngamanani kunye neenkcukacha zobuchwephesha, sicinga ukuba sinepaneli I-27-intshi ye-VA LCD egobileyo (i-68,6cm ukuphela-ukuya-esiphelweni) ine-16: 9 layout, okanye njengoko besitsho: I-Ultra-panoramic, eyenza ukusetyenziswa kwayo kube mnandi kwaye ikukhumbuze ukuba unokulahla ngokulula ukubek 'esweni imo yesibini, ukufumana iziphumo ezingaphezulu kwezincumisayo.
I-intshi ye-27 ye-Philips egobile
Umzekelo 278E8QJAB / 00
Uhlobo lwepaneli VA LCD ene-178º yokujonga ikona
Akhanye I-250 cd / m2
RGB kunye ne-NTSC I-130% kunye ne-104% ngokwahlukeneyo kunye ne-sRGB
Iskena 54-84 kHz kunye ne-49-75 Hz
Iikitikiti I-VGA-i-DisplayPort -I-HDMI (i-HDCP yeDijithali) kunye ne-AUX ngaphakathi / ngaphandle
Izithethi eziHlanganisiweyo Ewe 2 x 3 W
Ixabiso Ukusuka kwi-214 euro
Inyaniso yokuba siphambi kwepaneli VA Ayizukunciphisa ukusebenza kwemihla ngemihla kakhulu kuthathelwa ingqalelo ubungakanani obukhulu bescreen kunye nomgangatho wepaneli enikezela ngokuqaqamba kwezona ziqhelekileyo, sifumana Ngama-250 cd / m2. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uninzi lwabadlala umdlalo baya kufumana esweni esaneleyo, nangona kungenjalo, ukusukela oko Ukulibaziseka kwe-4ms kumfanekiso, okungalunganga kwaphela ukuba sinyanisekile, masithi sanele kuninzi lwabasebenzisi, kodwa "abadlali" sele befuna amaxesha okuphendula phakathi kwe-1 kunye ne-2 ms. Nangona kunjalo, senze iimvavanyo kubadubuli kwaye ukubek'esweni kuziphathe kakuhle.
Unxibelelwano, imultimedia kunye namava omsebenzisi
Sifumene uqhagamshelo olusishiyile incasa emnandi, nangona sinezibuko leVGA phantse lingasasetyenziswa namhlanje, kwelinye icala sineDisplayPort kunye neHDMI eya kubavuyisa uninzi lwabasebenzisi. Nangona kunjalo, ndicinga ukuba uPhilips ngewayengazange akhuphe ukusetyenziswa kweVGA kwaye ongeze ubuncinci izibuko elinye le-HDMI, inyani kukuba i-HDMI yeyona ndawo isetyenziswa kakhulu namhlanje kwaye ukuba ufuna ukuyisebenzisa ngokomzekelo ngenkqubo yomdlalo wevidiyo Ngexesha elifanayo lomsebenzi kuya kufuneka utshintshe iintambo ngokuqhubekayo ngaphandle kokuba ikhompyuter yakho inezibuko leDisplayPort. Ngokuqinisekileyo, Kolu luhlu lweemveliso kubonakala ngathi kum yeyona nto ifunekayo ukuba negalelo elingaphezulu kwesinye le-HDMI.
Kwelinye icala, inezithethi ezibini ezisebenza kancinci kunokususa endleleni, ukubek'esweni okunjalo kufanelekile ubuncinci ukudibanisa ezinye izithethi ezilungileyo okanye ibha yesandi yalo naluphi na uhlobo. Izithethi zibonakala ngokungabikho kwee-bass, Nangona kunjalo, azikho mbi kunale sihlala siyifumana kolu hlobo lweemveliso kuba zihlala zibandakanyiwe kunokuba zikukhuphe kwingxaki ethile. Ngokwenxalenye yayo, ukulawula imenyu kunye noluhlu olubalulekileyo lokuveliswa kwemifanekiso esinokuthi sikhethe ngasemva enomdla kwaye ikhululekile ukuyisebenzisa, eqhelekileyo kwii-monitors ze-Philips kwaye icetyiswe kakhulu.
Uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi lungekho
Olunye ukuvuza okulula
Ngokuchasene noku kubekwa kweliso Ukusuka ePhilips, kufuneka nditsho ukuba uninzi lweepaneli zolu hlobo zihlala zinokuvuza okukhanyayo, nangona kungachaphazeli ukusetyenziswa kwesiqhelo, ngezikrini ezimnyama ngokupheleleyo zinokusenza siphambane, nangona kunjalo, Ndiphosa ilitye lokuqala iliso le-LCD elingakhuphi ukukhanya. Ngokwenxalenye yayo, into endiyithandileyo ubuncinci kude kube malunga nokubeka iliso ngokuchanekileyo kukuba inegalelo elifanayo le-HDMI namhlanje.
Into endiyithandayo kakhulu malunga nokubeka esweni Ngaphandle kwamathandabuzo umlinganiso ochanekileyo kunye nomyinge, le esweni i-27-intshi ivumela umsebenzisi ukuba aqhele izikrini ezibini ukuba alibale malunga nalo mkhwa mdala phantse ngokupheleleyo. Elinye inqaku elibalulekileyo kukukhathalelwa kuyilo kunye nezinto ezigqityiweyo kwifemu efana nePhilips ihlala ibandakanya kuyilo lwayo. Kwelinye icala, kwinqanaba lokwahluka, ukuqaqamba kunye nokuveliswa kwakhona kombala, kunye nezinye iiparameter, kwabonakala kulungile kum, ndiphawula ukuba bendisoloko ndithanda iipaneli zePhilips iminyaka emininzi.
Sifumene imveliso ejikeleze kwaye yacetyiswa, kunzima ukuthelekisa nabanye ngokwexabiso lemali kuthathelwa ingqalelo oko ungayifumana kwiAmazon ukusuka kwi-214 euro ekhaya. Ke, ndingacebisa ukuba libeke esweni ukuba ucinga ukulisebenzisa ikakhulu emsebenzini. Ukongeza, abasebenzisi banike uphononongo oluchanekileyo phantse kuzo zonke iivenkile apho zithengiswa khona, ngoku kukuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Sihlalutya iliso le-Philips E278E8QJAB / 00, i-intshi ezingama-27 zomsebenzi omsulwa
I-LinkedIn isebenza njani